I-SAA ne-CRP zisebenza ekuhlolweni kwe-Virus pneumonia (NCP) -News-Sinocare
I-SAA ne-CRP zisebenza ekuhlolweni kwe-Virus pneumonia (NCP) yenoveli
Isikhathi: 2020-02-12 Hits: 200
Selokhu kwaqubuka inoveli coronavirus eWuhan, eChina, uhulumeni waseChina kanye nabo bonke abantu baseChina bathatha yonke imizamo yethu ukunqoba impi yokulwa nobhadane lwe-coronavirus.
Amacala weCoronavirus nawo wonke amacala okusolwa kokungenwa kwe-coronavirus yenoveli afuna ukuthi kutholakale isifo esisheshayo nesisebenzayo, ukuhlukaniswa, kanye nokwelashwa.
Ngokwesivumelwano samuva sokwelashwa kwe-novel coronavirus pneumonia (NCP), ekhishwe yiNational Health Commission, sisho ukuthi iningi leziguli ezine-C-reactive protein (CRP) ezigulini liphezulu kakhulu kunezinga leqembu elingatheleleki, i-procalcitonin (PCT) izinga liphezulu. okwejwayelekile; Izinga le-D-Dimer lizokhuphuka phakathi kwamacala anamandla.
Ngasikhathi sinye, olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi olufana neCRP, i-serum amyloid A (SAA) iyisiphenduli esizwelayo esigabeni esibucayi futhi. Izinga le-CRP ne-SAA egazini liyinkomba ebalulekile ekhombisa izinga lokuvuvukala kweziguli. Ukuhlolwa kokuvuvukala ngeCRP & SAA kungasheshiswa futhi ukufundwa kwesiginali yesikhathi sangempela kunamandla amakhulu okuvumela odokotela ukuthi bathathe izinyathelo ezidingekayo ngokushesha.
Ezigulini ezinegciwane le-coronavirus, izinga le-SAA lenyuke kakhulu ngesikhathi sokutheleleka kokuqala, ngaphezu kwalokho, izinga le-SAA ne-CRP lizoshintshashintsha zombili kanye nesifo sokuvuvukala siqhubeka; Ngemuva kokuthi inoveli coronavirus iphenduke ine-negative, i-SAA incipha kakhulu ize ibuyele kokujwayelekile.
Njengoba sekuqinisekisiwe ukuthi ama-coronavirus angama-noveli angadluliselwa kusuka komunye umuntu kuye komunye umuntu, imvamisa ngemuva kokuxhumana okusondelene nesiguli esinegciwane, kunconywa ukuthi kuhlukaniswe nabantu abodwa. Kuthiwani ngobuningi bamacala asolwayo? Lezi ziguli ezisolwayo kufanele zigqugquzelwe ukuthi zivakashele izikhungo zezempilo ezisezingeni lomphakathi ukwehlisa umthwalo osindayo wezibhedlela ezinkulu futhi zinciphise nengozi yokudluliswa kwesibili.
Kuhlanganiswe nokuhlolwa kwe-CRP + SAA, noma ngabe i-NCP ingenazimpawu ezisobala, umkhuhlane noma ukukhwehlela, kepha izinga le-SAA emzimbeni lidlula lelo elijwayelekile, lingasinciphisa ngempumelelo isilinganiso se-misdiagnosis kusengaphambili.
Ikhasi Langaphambili: Isifo sikashukela sithinteka ekungenweni yi-Virus yenoveli
Ikhasi elilandelayo: Sinocare nge-Medlab Middle East 2020